के जनप्रतिनिधी भन्दा कार्यक्रम संचालककै विश्वास भएकै हो त ? - समय-समाचार
के जनप्रतिनिधी भन्दा कार्यक्रम संचालककै विश्वास भएकै हो त ?
समय-समाचार बुधबार, २०७८ पुस १४ गते, ११:२९ मा प्रकाशित
सन्चारमाध्म र पत्रकारलाई आवाजविहिनहरुको आवाजको रुपमा मानिन्छ । अर्थात् यिनिहरु माध्यम नै हुन् जनताको आवाज सम्बन्धित ठाउँ अर्थात् राज्य तथा सरकारलाई पु¥याउन । जनताको पिरमर्का, उनिहरुको असुविधा तथा उनीहरुलाई परेको अन्यायको बारेमा सम्बन्धित मान्छेलाई झकझकाउने काम पनि पत्रकार, सन्चारकर्मी तथा सन्चारमाध्यमकै हो । एक हिसाबले यिनीहरु पुल मात्र हुन् ।
बास्तवमा भन्ने हो भने राज्य र सरकारका जनप्रतिनिधिहरु नै जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख मान्छे हुन् तर हिजोआज जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनताको उती विश्वास र भरोसा देखिन्न । स–साना कुरा तथा समाधानको लागि जनता जनप्रतिनिधी भएको ठाउँमा हैन, सन्चारकर्मी अर्थात् पत्रकारलाई गुहार्न पुग्छन् जुन नसुहाउँदो कुरा हो । पत्रकार तथा सन्चारजगत त नदेखेको कुरा , लुकेको कुरा, जनप्रतिनिधि अर्थात् राज्य सामु राखीदिने पुल न हुन् । जनताको असली पिरमर्काको सम्बोधन त राज्यका जिम्मेवार निकायका मान्छेले गर्ने हो । असली एक्सनमा जाने, पिडितलाई न्याय र पिडकलाई कार्वाही गर्ने हकअधिकार त मात्र राज्यका निकायहरु तथा सम्बन्धित मान्छे्लाई नै हुन्छ । तर मानिसहरु जनप्रतिनिधीलाई भन्नुभन्दा पनि संचारकर्मी अर्थात पत्रकारलाई भन्यो भने छिटो न्याय पाइन्छ भन्नेमा पुगेका छन् । किनभने बारम्बार ताकेता गर्दा पनि जनप्रतिनिधीले जनताको गुनासो नसुन्नु, समाधानको बाटो नदिनु, दुई दिनमा हुने काम दुई बर्षसम्म अन्यौलमा राखिदिनु यसका कारण हुनसक्छन् । त्यसैले त सन्चारकर्मी तथा सन्चारजगतसामु आफनो समस्या राख्यो भने समाधान पाइन्छ भन्नेमा जनता पुगेका हुन् । संचारकर्मी रवी लामिछानेले संचालन गर्दे आएको कार्यक्रम यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
केही समय अगाडी राप्रपा नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि रवि लामिछानेको कार्यक्रमलाई इँकित गर्दे भनेका थिए । “ नेता तथा जनप्रतिनिधीको विश्वास गर्न मान्छेले छोडिसके , जनप्रतिनिधिलाई भन्नु भन्दा पनि किन कार्यक्रम संचालकको शरणमा गएका छन जनता समस्या समाधानको लागी” । उनको यो भनाईबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि मानिसहरु कति उदास छन् जनप्रतिनिधिप्रति भन्ने कुरा ।
जनताको करबाट नै राज्यका सेवासुविधाहरु लिइरहेका जनप्रतिनिधीहरु समयमा नै सचेत हुन आवाश्यक छ । निर्वाचनको बेलामा भोटको आशमा किसानको गोठमा गएर गाईभैँसी दुहीदिने, उनीहरुको काखे बच्चालाई आफनो अँगालोमा बेर्ने अनि खेतबारीमा किसानसँगै काम गर्ने देखावटी काम गर्ने अनि भोट पाएर जनप्रतिनिधी भईसकेपछी देखेको नदेखै गरेर बस्ने परिपाटीले पनि जनताको जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुप्रति विश्वास घटेको हो । नेता तथा जनप्रतिनिधीहरुप्रती चुनाव अघी र पछी, जीत वा हार जे भएपनी जनताको आसपासमै रहने र उनीहरुका पिरमर्कामा सधै सँगै रहनसके मात्रै राज्यका प्रतिनिधीहरुप्रती जनताको विश्वास अडिग हुनसक्छ । केही बर्ष मात्रै हैन, लामो समय राजनीती गर्ने र जनताको मन जित्ने हो भने यसबारेमा नेता तथा राजनीतीमा रहेका व्यक्तिहरुले समयमै बुभ्mन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
आसा गरौ उमेर ढल्दै र रोगले च्याप्दै गएका ओली अब…
धेरै ढिलो हुनु पहिल्यै गरिहालौ
अफगान राष्ट्रपतिले देश छोडे, राष्ट्रपति भवन तालिवानको कब्जामा, लाखौ घरबार…
ओलीको हर्कत, सर्वोच्चको निर्णय: भोली के?
बर्षेनी बाढीपहिरोको पिरलो: स्थायी समाधान कहिले ?
उज्वल थापाको निधन: को हुन् उनी ? के पाठ सिक्ने?
जनतामाझ १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको लोकप्रिय बजेट, खासमा…
ओली र भण्डारीको नालायिकीको पराकाष्ठा